पाकिस्तानको राष्ट्रिय मिठाई गुलाब जामुन !
इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले आफ्नो अफिसियल ट्वीटर एकाउन्टमा देशबासीसँग एक सवाल गरेको थियो । पाकिस्तानको राष्ट्रिय मिठाई कुन हो ? यस सवालमा राखिएका तीन विकल्पमा जेरी,गुलाव जामुन र वर्फी मध्ये अधिंका...
दक्षिण अफ्रिकामा रेल दुर्घटना- तीनको मृत्यु ६४१ घाइते
प्रिटोरिया । दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियामा रेल दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा दुई यात्रुवाहक रेल एक आपसमा ठक्कर खाँदा तीनको मृत्यु भएको छ भने ६४१ घाइते भएका छन् । दुर्घटनालाई लिएर आपत सेवा विभा...
आइएमएफको चीफ इकोनोमिस्ट बनिन् भारतीय गीता गोपीनाथ
वासिङटन । गीता गोपीनाथ इन्टरनेशनल मनिटरी फन्डको चिफ इकोनोमिस्ट बन्न सफल भएकी छिन् । भारतको मैसुरमा जन्मिएकी भारतीय अमेरिकन अर्थशास्त्री गीता यस पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा को...
१० वर्ष देखी अस्पतालको कोमामा रहेकी महिलाले शिशुलाई जन्म दिइन
एरिजोना । अमेरिकाको फिनिक्समा एक आश्चर्यजनक घटना घटेको छ । एरिजोनाको एक नीजि अस्पतालमा दश वर्ष देखी कोमामा रहेकी महिलाले एक शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । केपी एचओ एवंम केटीविके टोलिभिजन नेटवर्कको समाच...
न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका- मेक्सीको सिमानामा पर्खाल लगाउने आफ्नो घोषणा फेरी दोर्याएका छन् । सिएनएनले जनाए अनुसार ट्रम्पले भने, पर्खाल लगाउने आफ्नो घोषणाको निम्ती आवश्यक ...
मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन ट्रम्पले दिए धम्की
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन संसद्ले बजेट नछुट्याए आफूले कुनै पनि विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका छन् । उनले दुई सातादेखि आंशिक रुपमा प्रभावित हु...
ट्रम्पको कट्टर आलोचक नान्सी पेलोसी प्रतिनिधी सभा अध्यक्षमा निर्वाचित
न्यूयोर्क । डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ट नेता नान्सी पेलोसी अमेरिकी संसदको प्रतिनिधी सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन् । सन २००७ देखी २०११ सम्म प्रतिनिधी सभा अध्यक्षको पद सफलता पूर्वक निभाएकी पेलोसी...
अदभुत पूर्वाधारमा चीनको फड्को
बेजिङ । चीनको ताइ युआन शहरमा बनाइएको अदभुत पुल देख्नेहरु आश्चर्य चकित नभई रहन सक्दैनन् । हाईवेमा तीन तले पुल देख्ना साथ जिब्रो निकाल्न बाध्य पार्ने अदभुत पूर्वाधार चीनको नीम्ती सामान्य बन्दैछ । चीनको...
पेन्टागन प्रवक्ताले दिइन राजीनामा, चार्ल्स ई समर्स प्रमुख बन्दै
न्यूयोर्क । पेन्टागनको शिर्ष प्रवक्ताले राजीनामा दिएकी छिन् । प्रवक्ता माथी दुव्यवहारको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको थियो । प्रवक्ता डाना डब्लु ह्वाइटले आफ्नो राजीनामा घोषणा रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस द...
नयाँ साल छुट्टीको दौरान सडक दुर्घटनामा ४६३ ले जीवन गुमाए
एजेन्सी । सन २०१८ को डिसेम्बर २७ देखी २०१९ को २ जनवरी सम्म चलेको नयाँ सालको छुट्टी मनाउन क्रममा थाइल्याण्डको सडक दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ४६३ रहेको छ । उक्त अवधीमा घाइतेहरुको संख्या ४ हजार नाघेको अध...
फेक न्यूज मिडिया र आलोचकलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको शुभकामना
न्यूयोर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मंगलबार आफ्नो नयाँ वर्षको सन्देशमा आफ्ना आलोचक र फेक न्यूज मिडिया माथि कडा ब्यङ्ग्य गर्र्दै भने, सन २०१९ उनीहरुको लागि अत्यन्त राम्रो साल बन्नेछ । जो...
वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए। वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै भएका छन्। त्यस बाहेक हिंस...
न्यु इयर मनाइरहँदा विस्फोट, सातको मृत्यु
रुसको माग्नितोगोर्स्क शहरको एक भवनमा नयाँ वर्ष मनाइरहेको बेला विष्फोट हुँदा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६ जना बेपत्ता भएका छन् । धेरै नै घाइते भएका छन् । ५० भन्दा बढीलाई उद्धार गरिएको छ । ...
आइएफजे को रिपोर्ट- २०१८ मा ९४ पत्रकार मारिए
एजेन्सी । इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ जर्नालिष्टले सोमबार जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार सन २०१८ मा ९४ पत्रकार एवं मिडियाकर्मी मारिए । पछिल्ला तीन वर्षमा घट्दै गएको पत्रकार एवंम मिडियाकर्मीको हत्या यो वर्ष फेरि...
फिलिपिन्समा बाढी र भू- स्खलन, मृतकको सख्या ६१ नाघ्यो
फिलिपिन्स । फिलिपिन्समा गएको बाढी र भू- स्खलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६१ पुगेको छ भने हराउनेको संख्या १८ रहेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। राष्ट्रिय आपत जोखिम कम गर्ने कार्यालयले जनाए अनुसार घाईतेह...
बंगलादेशमा फेरि सत्तापक्ष नै विजयी
काठमाडौं । बंगलादेशमा फेरि सत्तापक्ष नै विजयी भएको छ । हिजो भएको आम निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको पार्टी अवामी लिग प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी भएको हो । हिजो भएको निर्वाचनमा अवामी ...
दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी अमेरिकी यौद्धाको ११२ बर्षको उमेरमा निधन
टेक्सास । दोस्रो विश्व युद्ध लडेका अमेरिकी यौद्धा एवं देशको सबै भन्दा बुजुर्ग व्यक्ति रिचर्ड ओवरटनको निधन भएको छ । उनी ११२ बर्षका थिए । सिएनएनको रिपोर्ट अनुसार रिचर्ड ओवरटनको निधन २७ डिसेम्बरमा भएको ह...
सुडान हिंसामा १९ को मृत्यु
सुडान । सुडान सरकारले ब्रेडको मुल्य बढाए सँगै भएको विरोध पछि मच्चिएको हिंसामा परि १९ मानिसको मृत्यु भएको छ । विगत केही दिनदेखी राष्ट्रपति ओमार अल बसिर सरकारको विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन गत विहिबार देखी ...
बेजिङ । चीनले रुसी सरकारसँग किनेको एस ४०० एयर डिफेन्स प्रणालीको पहिलो पटक सफलतापूर्वक परिक्षण गरेको छ । चीनको पिपुल्स लिभरेसन आर्मी रकेट फोर्सले अज्ञात स्थलमा गरेको परिक्षण सफल भएको साउथ चाइना मर्निङ ...
दुनियाँ भरको प्रहरी बन्न सक्दैन अमेरिका- राष्ट्रपति ट्रम्प
इराक । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको पत्नी मेलानिया इराकमा तैनाक अमेरिकी सैनिकलाई बधाई दिन पुगे । गत बुधबार अचानक राष्ट्रपतिको रुपमा इराकको पहिलो भ्रमण गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, अमेरि...